Chemical Nkwekọrịta Ndị Ahịa Ntanetị Blog
阿斯劳 dere na Anavar, oxandrolone .
Kedu ihe eji eji Oxandrolone ntụ ntụ mee? Nchịkọta -High ọcha dị ọcha Oxandrolone ntụ ntụ -Gịnị ka a na-eji ntụ ntụ Oxandrolone mee? -Gịnị ka m kwesịrị konw tupu m were mbadamba Oxandrolone? -Oxandrolone ojiji -Oxandrolone nchekwa na mkpofu -High ịdị ọcha Oxandrolone raw ntụ ntụ Oxandrolone akụrụngwa agwa CAS: 53-39-4 MF: C19H30O3 MW: 306.44 EINECS: 200-172-9 Ọcha: 98% Ngwugwu: Aluminom foil […]
阿斯劳 dere na fluoxymesterone, tamoxifen-citrate .
Ngwá ọgwụ PCT maka mgbake -Nolvadex, Clomid, Letrozole, Aromasin, Halotestin N'ebe a na-arụ ọrụ ahụ, otu esi ahọpụta steroid kwesịrị ekwesị maka ịkpụ ahụ bụ ajụjụ ị ga-ajụ, ọzọkwa enwere na MuscleTalk, nke ahụ bụ otu esi ahọ usoro ọgwụgwọ post (PCT) ) ọgwụ dị ka Clomid, Nolvadex na Letrozole, Aromasin, Halotestin, Anastrozole n'ụzọ ziri ezi Taa anyị ga - akuziri gị otu esi ahọrọ ọgwụ PCT kwesịrị ekwesị. Gịnị bụ…
阿斯劳 dere na Letrozole .
PCT Letrozole raw powder-Ihe ise m ga-ama !!! Q1: Letrozole raw ntụ ntụ bụ steroid? A1: Letrozole raw ntụ ntụ, ihe akụrụngwa steroid nke ntụ ntụ nke Letrozole, bụ ụdị Hormore, ọ bụghị steroid, nke usoro PCT, ndị ọzọ dị ka Tamoxifen, Clomid, Aromasin, Halotestin, Anastrozole, Ndị a bụ isi ihe ọmụma: CAS: 112809 -51-5, Molekụla Formula: C17H11N5, Molecular Weight: 285.31 gbazee Point: 181-183 ° C, Agba: White ma ọ bụ gbanyụọ ọcha rystalline ntụ ntụ, ndị mmadụ na-azụta Letrozole na-echekarị na […]
阿斯劳 dere na nandrolone decanoate .
Deca Durabolin, nke a na-akpọkarị "Deca", bụ aha aha maka Nandrolone decanoate (C28H44O3), steroid nke anabolic nke na-eme ka arụmọrụ dịkwuo mma site n'ịkwalite ike na ume, na-ebelata ike ọgwụgwụ akwara, ma na-arịwanye elu ahụ ike. Ọ na-enye nnukwu uru oge na-aga site na obere mmetụta dị ole na ole mgbe ejiri ya rụọ ọrụ. N'ihi mbara elu ugwu nke irè doses, […]
Otu esi eme ka Testosterone Cypionate gwụchara site na ntụ ntụ nke Steroid
阿斯劳 dere na Testosterone cypionate .
N'ebe a na-arụ ọrụ ahụ, enwere steroid - Testosterone Cypionate ntụ ntụ nke na - enyere aka iwulite ahụ ike ma wusie ọkpụkpụ ike, nke a na - ejikwa maka abụba abụba na mmụba mmekọahụ. Ndị mmadụ na - azụkarị ngwaahịa Testosterone Cypionate site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. steroidszụta steroid raw ntụ ntụ n'ihi obere ego ya na ọ bụghị usoro nrụpụta siri ike.Today we are here to share […]